Somali daily News – Fariin Jaceyl
dr.yare December 30, 2012 1
Hadalada macaan uu leeyahay jaceylka ama qofka ku jecel uu ku dhihi karo ama qofka aad jeceshahay aad dhihi kartid waa ereyadaan hoos ku qoran ku raaxeysta saaxibayaal iyo inta jaceylka qadarisa by Amiinka
1-Sheeyada macaan wey fududahay sida loo iibsado eryada macaan wey fududyihin ku dhaawaqoodo balse qof macaan adiga oo kale ah sida lagu helo wey adagtahy sidaas oo dhan ayay noolashada u macaantahay.
2-Maxaan u daboolnaa indhaheena markaan hurudno, markaan riyoooneyno markaan is dhunkaneyno hadaba waxaa u sabab ah sheyda ugu macaan aduunka waa lama arkaa balsa aniga markaan indhaha isku qabto waan ku arkaa. 3-Fariin walbo aad ii so dirtid waxaan ku xafidaa qalbigeyga..eray walbo aad tiraahdid wuxuu taabtaa noolasheyda,,ismana aragno laakinsa mar walbo xageyga qiimo ayaad ka leedahay.
4-Ma hubo noolasha waxa ay igu kordhineyso..ma hubo riyadeyda in ey rumoowi doonto..mu hubo jeceylka waxa igu sameyn doono laakin waxaan hubaa hal arin midaas oo ah in aan aad ku jeclahay.
5-Hello maxaa ku dhacay telefoonkaada waxaan isku dayay marar badan in aan soo garaaco teleefonkaada laaakiinsa nasiib daro waxa uu leeyahay lambarkaa d raadineyso qalbikaaga ayuu ku jiraan.
Maxamedcusmaan November 15, 2014 at 9:13 PM - Reply
Aad iyo aad ayey u macaan yihiin eri yadaan balse dad badan ayey faham saneen